Sunday 17th of October 2021 / 05:52:23 AM
तोकिएकै समयमा तीनै तहकोे निर्वाचन : देउवा
भक्तपुर, ७ चैत्र । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरवहादुर देउवाले तोकिएकै समयमा तीनै तहकोे निर्वाचनको हुने बताएका छन् ।नेपाली कांग्रेसका नेता स्वर्गीय गिरिजा प्रसाद कोईरालाको सातौं स्मृती दिवसको अवसरमा आज भक्तपुरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्द
एमालेबाट को बन्लान महानगरको मेयर ?
काठमाडौं, ७ चैत । स्थानीय निकायको चुनाव हुने नहुने अन्योल कायमै छ । प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले चुनावमा होमिइसकेको छ । तर सरकारको मुख्य घटक नेपाली कांग्रेस चुनावमा भाग लिने कुरामै द्विविधाग्रस्त देखिएको छ । एमालेका महानगरपालिका, उपमहानगर र नगरपालिका त
निर्वाचन कसैले चाहेर पनि रोक्न सक्दैन : प्रवक्ता कार्की
भक्तपुर, ४ चैत । सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना तथा सञ्चार मन्त्री सुरेन्द्र कार्कीले आगामी बैशाख ३१ गते हुने भनिएको निर्वाचन कसैले चाहेर पनि कुनै हालतमा रोक्न नसक्सने बताएका छन् ।
सुर्यबिनायकस्थित रफत सञ्चार क्लवमा भएको साक्षात्कार का
१६ बुँदे विज्ञप्ती जारी गर्दै सकियो एमालेको मेची–महाकाली अभियान
काठमाडौं, ४ चैत। फागुन २१ गते झापाको काँकडभिट्टाबाट सुरु भएको नेकपा एमालेको मेची–महाकाली अभियानको आज समापन गरिएको छ ।
कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी अभियानको समापन गरिएको हो । समापनमा एमाले अध्यक्ष
स्टेफन हकिङको जबाफ दिदैछौं
२१ औं शताव्दीका महान् भौतिकशास्त्री स्टेफन हकिङले आफ्नो चर्चित पुस्तक ‘द ग्राइन्ड डिजाइन’को सुरुमै यस्तो लेखेका छन्– ‘दर्शन (दर्शनशास्त्र) मरिसकेको छ । दर्शनले आधुनिक विज्ञानका आधुनिक विकासहरुसँग कदम मिलाएको छैन । विशेषगरी
स्ववियू चुनाव : ३ छात्रा अध्यक्ष सहित ९ क्याम्पसमा अनेरास्ववियु बिजयी
अनलाइन दर्पण 2017-02-26
काठमाडौं । सत्तारुढ गठबंधन दल नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्र निकट बिध्यार्थी संगठन ने• बि • संघ र अखिल क्रान्तिकारीले देशभरका विभिन्न क्याम्पसमा तालाबन्दी र आगजनी गरेपछि फागुन १८ गतेका लागि तोकिएको स्ववियू निर्वाचन हुने न
‘सरकारको औचित्य समाप्त भयो, विकल्प खोज्नुपर्छ;भीम रावल
९ फागुन । नेकपा (एमाले) का उपाध्यक्ष तथा पूर्वउपप्रधानमन्त्री भीम रावलले वर्तमान सरकारको औचित्य सकिएको टिप्पणी गरेका छन् । जाजरकोटको स्याउलीबजारमा आयोजित जनसभामालाई सम्बोधन गर्दै नेता रावलले भने, ‘यो सरकारका औचित्य समाप्त भयो । यसले मुलुकलाई
सानोठिमी क्याम्पसमा विप्लब निकट क्रान्तिकारीको उम्मेद्वारी घोषणा
भक्तपुर ,९ फागुन । बिगत ८ बर्षदेखी रोकिएको स्ववियू निर्वाचन यही फागुन १८ गते हुने भएपछी नेत्रबिक्रम चन्द (विप्लब) निकट अखिल (क्रान्तिकारी) ले भक्तपुरको सानोठिमी क्याम्पसमा आज आफ्नो उम्मेद्वारी घोषणा गरेको छ ।
महेन्द्र वहुमुखी क्याम्पसको स्ववियु अध्यक्षमा अखिलका मल्लको उम्मेद्वारी
नेपालगन्ज, ८ फागुन ।अनेरास्ववियु बांकेले फागुन १८ गते हुने स्ववियु निर्वाचनका लागी विभिन्न क्याम्पसमा उम्मेद्वारी घोषणा गर्ने क्रम तिव्र पारेको छ ।
अखिलको वलियो संगठन भएको क्याम्पसको रुपमा चिनिएको बाकेको महेन्द्र वहुमुखी क्याम्पसमा टे
सप्तगण्डकी क्याम्पसको स्ववियु अध्यक्षमा अखिलका ढकालको उम्मेद्धारी
चितवन,फागुन ८ । अनेरास्ववियु चितवनले फागुन १८ गते हुने स्ववियु निर्वाचनका लागी विभिन्न क्याम्पसमा उम्मेद्वार घोषणा गर्ने क्रम तिव्र पारेको छ ।
अखिलको वलियो संगठन भएको क्याम्पसको रुपमा चिनिएको चितवनको सप्तगण्डकी क्याम्पसमा शिव ढकाललाई
सिन्धुपाल्चोक कांग्रेसका करिब एक दर्जन व्यवसायी एमाले प्रवेश
७ फागुन । प्रजातन्त्र दिवसका दिन सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको क्षेत्र नं १ तातोपानी एरियाका प्रतिष्ठित व्यवसायीहरु नेपली कांग्रेस पत्यिाग गरी नेकपा (एमाले) प्रवेस गरेका छन् ।
ललितपुरस्थित तुलसीलाल अमात्य स्मृति प्रतिष्ठानमा शनिबार नेकपा (एमाले) प
आगामी निर्वाचनमा एमालेले दुई तिहाई बहुमत ल्याउने सचिव भट्टराईको दाबी
भक्तपुर, । नेकपा एमालेका सचिव एवं प्रचार विभाग प्रमुख योगश भट्टराईले एमालेले आगामी निर्वाचनमा दुई तिहाई बहुमत ल्याउने दाबी गरेका छन ।
रफत सञ्चार क्लवद्वारा आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै प्रचार विभाग प्रमुख
स्ववियूमा दुई तिहाई सिट जित्ने अखिलको दाबी
अनलाइन दर्पण 2017-02-17
काठमाडौं । आगामी फागुन १८ गते हुने स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) को निर्वाचनमा अनेरास्ववियुले दुई तिहाई सिट जित्ने अनेरास्ववियुकी अध्यक्ष्य नबिना लामाले दाबी गरिन ।
राजधानीमा आज आयोजीत एक भेलामा
तिवारीको हत्या षड्यन्त्रपूर्ण: एमाले
काठमाडौं। युवा संघ रुपन्देहीका अध्यक्ष दुर्गा तिवारीको हत्यालाई लिएर नेकपा एमालेले सरकारमाथि प्रश्न उठाएको छ ।
सोमबार साँझ विज्ञप्ति जारी गर्दै एमालेले घटनामा संलग्नलाई पक्राउ गरी कारबाही गर्न माग गरेको छ । तिवारीको सोमबार दिउ
फुटको संघारमा नेपाली काँग्रेस ! हिन्दु राष्ट्र र राजसंस्था फर्काउन खुमबहादुरले पार्टी फुटाउने
काठमाण्डौं, नेपाली काँग्रेस फेरि एकपटक फुटको संघारमा पुगेको छ । पार्टी सभापति देउवा क्याम्पमा रहेका काँग्रेसमा प्रभावशाली मानिने नेता खुमबहादुर खड्काले औपचारिक रुपमै काँग्रेस पार्टी विभाजनको तयारी गरेका हुन् । हिन्
अनेरास्ववियू (क्रान्तिकारी) काे १४ अाै ईकाई सम्मेलन सम्पन्न
सानाेठिमी, ३० म‌‍‍‌सिर । नेत्र बिक्रम चन्द (विप्लप) ले नेत्रित्व गरिरहेकाे नेकपा माअाेवादी निकट क्रान्तिकारी विद्यार्थीहरुकाे सानाेठिमी क्याम्पस इकार्इ कमिटिकाे १४ सम्मेलन भव्यरुपम
जिल्ला सभापतिले दिए शेरबहादुरलाई कडा चेतावनी
५ नम्वर प्रदेशबाट पहाडका जिल्ला छुट्टाईने गरी ल्याईएको संविधान संशोधनको प्रस्तावको बिरोधमा आन्दोलनको ८औं दिन आज विरोधसभालाई सम्वोधन गर्दै संयुक्त जनअन्दोलन परिचालन समिति गुल्मीको संयोजक रहेका कांग्रेस गुल्मी
भारतीय राजदुत रन्जीत रेलाई तत्काल देश निकाला गर्नुपर्छ : विजुक्छें
काठमाडौं, २२ मंसिर । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान विजुक्छेंले भारतीय राजदूत रन्जीत रेलाई तत्काल देश निकाला गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
संवाद क्लब नेपालले बुधबार राजधानीआयोजना गरेको अन्तरसंवाद कार्य
विप्लवमाथि यसकारण हुदैछन आधारहीन हमला ?
काठमाडौं, यतिवेला नेकपा (माओवादी) का महासचिब नेत्रविक्रम चन्द विप्लवमाथि चौतर्फि प्रहार भएको छ । राजनीतिमा उनको बढ्दो चार्मिङ र संगठनमा देखिएको तिब्र बिकासले विप्लवमाथिको प्रहार वढेको हो । उनका विरोधिहरुले सुरुमा विप्लवले माहौल खड
एमालेले संविधान संशोधन विधेयककोविरुद्ध संसद अवरुद्ध गर्ने
काठमाडौं, १५ मंसिर। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले संविधान संशोधन विधेयकविरुद्ध भोलि बिहीबारदेखि संसद अवरुद्ध पार्ने भएको छ ।
सरकारले सीमांकन हेरफेरसहित संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गरेपछि एमालेले सद